Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyadii Delta Air Lines ee Prague ilaa New York ayaa dib u bilaabanaya
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Czechia Breaking News • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Dib-u-bilaabashada duulimaadyada tooska ah ee tooska ah ee gegida diyaaradaha ee Prague waxaa xukuma labadaba dabcinta tallaabooyinka ka-hortagga cudurrada faafa ee adduunka iyo xeerarka gelitaanka martida shisheeye ee Jamhuuriyadda Czech.
Dib -u -bilaabashada xiriir toos ah oo hawada ah oo lala yeesho USA ayaa gabi ahaanba muhiim u ah aragtida dalxiiska ee gudaha.
Dalxiisayaasha amaahda leh ee ka yimid Mareykanka Ameerika waa macmiil soo -dhoweyn u leh ganacsatada dalxiiska ee Prague iyo gobollada kaleba.
Cusboonaysiinta dheeraadka ah ee duullimaadyada dhaadheer ayaa ka mid ah mudnaanta koowaad ee Madaarka Prague.
Delta Air Lines, diyaarad mareykan ah, ayaa bilaabi doonta duulimaadyadeedii tooska ahaa ee Prague ilaa New York, JFK Airport, laga bilaabo 26 May 2022.
Inta lagu jiro jadwalka duulimaadka xagaaga oo dhan, diyaaradda ayaa qorshaynaysa inay waddo waddada illaa toddoba jeer toddobaadkii iyadoo adeegsanaysa diyaaradaha Boeing 767-300.
“Dib-u-bilaabidda duulimaadyadii tooska ahaa ee New York, oo ahaa mid ka mid ah jidadkii ugu soo jiidashada badnaa ee laga soo shaqeeyay Madaarka Prague sanadka 2019, waa war aad u fiican ugu horeyn rakaabka Czech. Waxay awoodi doonaan inay ku raaxaystaan ​​isku xirnaan habboon oo degdeg ah xeebta bari ee Maraykanka ka dib markii la joojiyay laba sano. Kahor qalalaasaha hadda jira, in kabadan 70,000 oo rakaab ah ayaa u kala gooshi jiray Prague iyo New York sanad walba, taas oo u taagan karti xoog leh, oo awood u leh inay taageerto ilaa hal sano oo xiriir toos ah la leh Prague, ”Jiří Pos, Gudoomiyaha Gudiga Agaasimayaasha Madaarka Prague , ayaa sheegay, isagoo intaa ku daray: "dib-u-soo bandhigista ee wadada waa, iyo waxyaabo kale, natiijada wadahadalada fuliyay by Madaarka Prague wakiilo ka socda Madasha Horumarinta Waddooyinka Adduunka, oo hadda ka socota magaalada Milano ee Talyaaniga. ”
Guido Hackel, Air France, KLM Delta Air Lines Maareeyaha Wadanka ee Austria, Czech Republic iyo Slovakia, ayaa xusay.
“Dib -u -bilaabashada xiriir toos ah oo hawada ah oo lala yeesho Mareykanka ayaa gabi ahaanba muhiim u ah aragtida dalxiiska ee gudaha. Tani waxay noo oggolaan doontaa inaan ku sii wadno kororka joogtada ah ee tirada dalxiisayaasha ka imanaya Mareykanka, oo annaga, meesha aan u soconno, aan ku raaxaysannay ka hor xiisadda COVID-19. Dalxiisayaasha amaahda leh ee ka yimid Mareykanka Ameerika waa macmiil soo -dhoweyn u leh ganacsatada dalxiiska ee Prague iyo gobollada kaleba. Joogitaanka dheer iyo booqashooyinka meelaha ka baxsan caasimadda ayaa caan u ah dalxiisayaasha Mareykanka, ”Jan Herget, Maareeyaha Maareynta Dalxiiska ee Czech, ayaa faallo ka bixiyay.
Dib u bilaabashada duulimaadyadii tooska ahaa ee muddada dheer socday ee Madaarka Prague waxaa lagu maamulaa labadaba dabcinta tallaabooyinka ka-hortagga cudurrada faafa ee adduunka iyo xeerarka gelitaanka martida shisheeye ee Jamhuuriyadda Czech. 15 ka mid ah duullimaadyada dhaadheer ee ay bixiso garoonka Prague ee 2019, kaliya waddooyinka u socda Dubai iyo Doha ayaa hadda shaqeynaya. Xilliga jiilaalka, duulimaadyo cusub oo kiro ah oo taga meelo aad u fog oo qalaad ayaa lagu dari doonaa. Cusboonaysiinta dheeraadka ah ee duullimaadyada dhaadheer ayaa ka mid ah mudnaanta koowaad ee Madaarka Prague.
Wakiilada Madaarka Prague iyo CzechTourism ayaa hadda ka qaybgalaya Madasha Horumarinta Waddooyinka Adduunka ee 2021, oo ah dhacdada ugu weyn adduunka ee jadwalka horumarinta taraafikada hawada oo la qabto sannad walba. Sannadkan, waxa ugu weyn ee diiradda la saarayo ayaa ah dib -u -bilaabista taraafikada hawada ka dib qalalaasaha ka dhashay faafinta nooc cusub oo coronavirus ah oo ujeeddadiisu tahay in la gaaro sida ugu dhaqsaha badan ee suurtogalka ah ee lagu laabto tirada duullimaadyada la bixiyo 2019.